Fumana iidolophu ezilungileyo kunxweme lwasePortugal | IBezzia
Iilali ezinomtsalane kunxweme lwasePortugal
Susana Garcia | 19/05/2021 10:00 | yokuPhila, Uhambo
IPortugal lilizwe elinomtsalane omninzi, kunye namasiko amangalisayo kunye neekhilomitha ezininzi zonxweme ezenza ukuba ibe yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokuchitha ihlobo. Kukho iindawo ezingaselunxwemeni ezithandwayo, ezinje ngeAlgarve, kodwa inokuninzi okunokukufumanisa, njengonxweme olusemantla needolophu zalo ezifanayo nezo zeGalicia okanye indawo ephakathi, apho sele sibona khona abakhenkethi abaziwayo iindawo.
Sobona ezinye zeedolophu ezintle esinokundwendwela ukuba sihamba ngonxweme lwasePortugal. Olu nxweme lunokubonwa kwaye ukuthatha idrive kungumbono olungileyo. Olunye lolona hambo lubalaseleyo lunokwenziwa ePortugal.
2 IPóvoa de Varzim
IViana do Castelo yenye yeendawo eziphambili zokundwendwela kunxweme olusemantla lwasePortugal. Le dolophu incinci inonxweme kodwa ineendawo ezininzi zokubona. Ngaphezulu kwe intaba siyayibona icawe yaseSanta LuziaIsakhiwo esikhethekileyo esineplani yesikwere eneembono ezintle zolwandle kunye nesixeko. Kanye esixekweni, ungaya kwizibuko ukuze ubone inqanawa yaseGil Eanes, inqanawa endala yasesibhedlele apho ungabona khona ifanitshala abayisebenzisileyo. EViana do Castelo singatyelela imyuziyam yetshokholethi.
IPóvoa de Varzim
Le dolophu incinci ikwisithili sasePorto kwaye yayifudula iyindawo enikezelwe ekulobeni. Edolophini sinokubona enye yeenqaba eziqhelekileyo ezisemantla, ezaziwayo njengenqaba yeNossa Senhora de Conceiçao. Elinye lawona manqaku anokubonwa yi-Iglesia da Lapa, encinci kodwa inomdla kakhulu. Kufuphi nenqaba sibona ilitye lesikhumbuzo kumfazi olobayo. Namhlanje le dolophu inokhenketho oluninzi ngenxa yeelwandle zayo.
Inani labantu baseA Aveiro eyaziwa ngokuba yiVenice yasePortugal ngemijelo yayo, ezazisetyenziselwa urhwebo ngaphambili. IMoliceiros zizikhephe ezimibalabala kangangokuba kule mihla ziyonwabisa abakhenkethi ngokuzihambisa ngemijelo. Idolophu inezinto ezintle ezingaphambili. Siyakwazi ukubona iMyuziyam yase-Aveiro e-Convent of Jesus kunye neCatedral da Sé de Aveiro. Kule ndawo akufuneki uphoswe ziilwandle zaseCosta Nova kunye neBarra elunxwemeni.
Le yenye yezona ndawo zibakhenkethi kunxweme lwasePortugal. I-Figueira da Foz ineelwandle ezintle kwaye zibanzi Njenge praia da Caridade. Kule ndawo sinokubona ezinye zeenqaba ezinjengeBuarcos neSanta Catarina. Kwindawo yasezidolophini yiNdlu yeSodolophu yaseSotto, isimbo saseFrance kunye negadi entle. Ikhasino yenye yeendawo zayo ezibalulekileyo ezinomtsalane kubakhenkethi abaninzi.
Le yenye ye-villa enomtsalane efanele ukutyelelwa. Kwimarike kamasipala sinokubona zonke iintlobo zokutya kwaye igadi yeVisconde da luz yindawo yokuhamba kumbindi wedolophu. Inkqubo ye- ukuhamba kunye neelwandle zaseRainha okanye ezaseRibeira zezona ngongoma zinomdla. Kuya kufuneka silahleke kwidolophu yakudala kwaye, umzekelo, i-Seixas Palace okanye inqaba endala.
La Abantu baseLagos bakummandla weAlgarve, kumazantsi ePortugal. Le yeyona ndawo yezokhenketho ePortugal. Amawa ePonta da Piedade mahle kakhulu kwaye nendawo yendalo ekufuneka ibonwe. Kule ndawo kukho iMeya Praia, enye yeelwandle zayo ezinkulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Iilali ezinomtsalane kunxweme lwasePortugal
Amaqhinga okufumana i-tan esempilweni
Unempilo entle yeenyawo